Ivanhoe | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त! Ivanhoe | स्लट Fruity £5+ £ 500 मुफ्त!
तपाईंले केही सुन्दर रुपैया लागि नजर गडाए भने, फल क्यासिनो स्लट तपाईं को लागि सही कुरा हो! यो लोकप्रिय Elk उत्पादन तपाईं नवीन सुविधाहरू सिद्ध मिश्रण संग रेट्रो दिन फिर्ता लिन्छ, आधुनिक स्लट मिसिन, र एक भव्य डट म्याट्रिक्स. यो तपाईंलाई सजिलो संग spins प्ले गर्न दिन्छ5केही आकर्षक रकम जीत अलग स्तर.
एल्क स्टूडियो अचम्मको विकास fruity क्यासिनो स्लट संग कला मोडेल र एल्गोरिदम को स्थिति अचम्मको एनिमेशन निकाल्ने. सर वाल्टर स्कट द्वारा एक उपन्यास प्रेरित, को स्टुडियोमा यस खेलको रेट्रो स्पर्श भइरहेको संग आएको छ. विकासकर्ता वर्ण आफ्नो नवीनता मार्फत सक्रिय छन् जो बनाउनको लागि जानिन्छ.
यो तपाईं सिद्ध गेमिङ अनुभव साथ शीर्ष वर्ग winnings संग प्रदान गर्दछ. शीर्ष को यो एक फल क्यासिनो स्लट जस्ता सुविधाहरू छ:
Stake-The game is powered by3रील संग मिलेर 17 भुक्तानी रेखाहरू. तपाईं यसलाई £ प्रति स्पिन 20p देखि सुरु प्ले गर्न सक्नुहुन्छ 100 ल्याप्टप जस्तै उपकरणहरूमा, स्मार्टफोन, र पीसी.
Symbols – The fruit casino slots are based on the comeback of the King as Ivanhoe सिंहासन उहाँलाई फिर्ता प्राप्त गर्न रिचर्ड साथ झगडे. यो स्लट तरबूज जस्तै प्रतीक छ, चेरी, crowns, कागति, नीलो 7s, रातो 7s, बारहरू, लोकप्रिय सेतो र रातो झण्डा पनि आकर्षक बोनस खेल सुविधा मार्फत प्राप्त गर्न.
Bonus levels – It has got5जो डट म्याट्रिक्स प्रदर्शन मा देख्न सकिन्छ बोनस को स्तर फरक. यो साधारण रेट्रो शैली बिक्री जस्तो. तपाईं प्रत्येक मा बोनस प्रतीक प्राप्त गर्न सक्छन् भने मात्र तपाईं बोनस सुविधा जित्न सक्छौं3रील. सिक्का एक सेट विजेता पछि, तपाईं बढ्दो multipliers संग चुनौतीहरू को एक उच्च स्तर सम्म गियर गर्न सक्नुहुन्छ. थप निःशुल्क spins संग, रिचर्ड मुकुट फिर्ता जीत लागि सिंहासन हटा गर्न सक्नुहुन्छ.
Free spins -This फल क्यासिनो स्लट खेल तपाईं अन्य सबै प्रतीक विकल्प जो जंगली रूपमा मुकुट अभिनय निःशुल्क spins दिन्छ, को स्क्याटर बाहेक. पहिलो हुँदा2स्तर, तपाईं कम्तिमा जीत आशा गरिन्छ 25 पटक आफ्नो खम्बा के हो. अर्को मा2स्तर, तपाईं जीत पायो 200 पटक. अन्तिम स्तर मा, तपाईं झोला सक्छन् 3000 पटक.
Multipliers-It helps you with multipliers starting at 2x and adding up by 1 प्रत्येक स्तर मा. तपाईं अन्तिम स्तर मा6गुणा अधिकतम पुग्न सक्दैन.
यो लोकप्रिय मध्ये एक छ फल क्यासिनो स्लट को RTP संग 96.3% र उच्च विचरण तपाईं लगभग जीत गर्न मौका दिने संग अद्वितीय छ 500 पटक आफ्नो प्रारम्भिक खम्बा.